Ozi akuko - resin bond pali paadi
Resin nkekọ diamond polishing pad
Resin nkekọ diamond polishing pad bụ otu n'ime isi ngwaahịa anyị, anyị anọwo na ụlọ ọrụ a karịa 10 afọ.
Resin nkekọ polishing pad na-mere site agwakọta na ịgbanye diamond ntụ ntụ, resin, na fillers na mgbe ahụ na-ekpo ọkụ-enwe na vulcanizing pịa, na mgbe jụrụ na demolding na-etolite egweri-arụ ọrụ oyi akwa.
Resin bonded matriks bụ nke ị ga - ahụ maka iji maka ụdị ihe niile. Ọ bụ ezie na mpempe akwụkwọ a na-acha polishing na-adị ka nke ukwuu, ha dị ezigbo iche. N'ezie ọnụ ọgụgụ nke diamonds, ịdị ike nke resin bond na ụkpụrụ dị n'elu niile na-ekere òkè na arụmọrụ ahụ.
Sortsdị mgbanwe dị iche iche na-ekere òkè na njirimara ziri ezi dị mkpa maka pịịlị polishing. Iji maa atụ, okwute ụfọdụ dị nro ma sie ike. N'ihi ya, ihe mkpuchi polishing ga-eyi dị iche iche ma ọ bụrụ na ejiri ya na marble karịa ka ọ ga-adị mgbe ejiri ya na quartzite ma ọ bụ granite. N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ mmadụ mere ihe dị ka quartz nwere njirimara ndị ọzọ ọ dị mkpa ka e chebara echiche. Dịka ọmụmaatụ, ịmepụta oke okpomọkụ n'oge nchara ncha nwere ike ime ka akara mee na nkume.
Maka ebumnuche ndị dị n'elu na ndị ọzọ, ị ga-ahụ ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ polishing. 3 Nzọụkwụ polishingPads, 5 Nzọụkwụ polishing pad, na7 Kwụpụ polishing padndị a bụ ole na ole n'ime usoro maka nke polishing pad na-awa. Mgbe ahụ, enwere mpempe akwụkwọ polishing nke emebere maka quartz na ndị ọzọ emere iji nye gị ike ịmịcha. Ihe ndị a niile dị iche iche dị iche iche, ọnụ diamond, na ọnụego ọnụahịa. Echiche bụ na ịchọrọ ịchọpụta ihe mpempe akwụkwọ na - arụ ọrụ kacha mma na igwe gị.
Ya mere, biko mara ịdị ike nke ala, na ụzọ na-egbu maramara (akọrọ ma ọ bụ mmiri mmiri) ị na-ahọrọ na mbụ, mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịhọrọ pad kwesịrị ekwesị.